သဘင်လေးရပ်သမိုင်းဝင်အငြိမ့်မင်းသမီးကြီး မထွေးလေး၏အုတ်ဂူကို တံတားဦး မြင်းဝန်သုသာန်မှ နွ?? - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ ဇန်နဝါရီ ၆-မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၊ တံတားဦးမြို့ မြင်း ဝန်သုသာန်ရှိ သဘင်လေးရပ်သမိုင်း ဝင်မင်းသမီးကြီး မထွေးလေး၏ အုတ်ဂူကို နွားကျော်ထသုသာန်သို့ ပြောင်းရွှေ့မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန် မာနိုင်ငံသဘင်အစည်းအရုံး(ဗဟို) မှ သိရသည်။
တံတားဦးမြို့ မြင်းဝန်သုသာန် ကို မြို့နယ်၏အစီအစဉ်ဖြင့် ဇန်န ဝါရီ ၉ ရက်တွင်ဖျက်သိမ်း၍ နေ ရာသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့မည်ဖြစ်သ ဖြင့် မင်းသမီးကြီးမထွေးလေးအုတ် ဂူအား ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်ခြင်းဖြစ် သည်။
”သဘင်အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒြပ်ရှိ၊ ဒြပ်မဲ့ ယဉ်ကျေး မှုတွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်တာပါ။ ဆုပ်ကိုင်လို့မရတဲ့ အဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီး ပညာတွေက ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ် ပါတယ်။ အခုအမေမထွေးလေး အုတ်ဂူကတော့ ဒြပ်ရှိအမွေအနှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုဒြပ်ရှိအမွေ အနှစ်တွေကို လက်လှမ်းမီတဲ့အ ခြေအနေအရ ကျွန်တော်တို့ဆက် လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ တာဝန်ရှိတဲ့အ တွက် ထိန်းသိမ်းသွားတာပါ”ဟု မြန်မာနိုင်ငံသဘင်အစည်းအရုံး (ဗဟို)မှ အတွင်းရေးမှူးဦးနေဝင်း ကပြောသည်။
အငြိမ့်မင်းသမီးကြီးမထွေးလေး အုတ်ဂူပြောင်းရွှေ့ထိန်းသိမ်းနိုင် ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသဘင် အစည်းအရုံး(ဗဟို)၏ဦးဆောင်မှု ဖြင့် မန္တလေးတိုင်းသဘင်အစည်း အရုံးမှ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၉ဝ ကျော်က ကွယ်လွန်ခဲ့သည့်မင်းသမီး မထွေးလေး အုတ်ဂူအဆိုပါသုသာန် ၌တည်ရှိခဲ့ခြင်းကို တံတားဦးမြို့မှ ကဗျာဆရာကြီး ကိုလေး(အင်းဝ ဂုဏ်ရည်)နှင့် မထွေးလေး၏ နောက်ဆုံးခင်ပွန်း သူကြီးဦးကြာညို ၏ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်များ၊ မထွေးလေး ကိုမမီလိုက်သော်လည်း အုတ်ဂူ ရှိစာတန်းဖတ်လိုက်ရသည့် သက် ကြီးရွယ်အိုများ၏ပြောကြားချက် များအရ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။
မင်းသမီးမထွေးလေးသည် သီပေါမင်း၏ နေမျိုးမဓုသဒ္ဒ ရွှေတောင်ဘွဲ့ဖြင့် မြှောက်စားချီးမြှင့် ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပြီး အသက် ၆ဝ နှစ် (အက္ကရာဇ် ၁၉၂၈)တွင် တံတား ဦးမြို့၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သဖြင့်မြင်းဝန် သုသာန်တွင် အုတ်ဂူဖြင့်သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ကျောင်းဆရာတစ်ဦးဖြစ်သော စာရေးဆရာဘုတလင်ချစ်လေး ကွယ်လွန်ခြင်း ၂၅ နှစ်ပြည့်အမှတ်တရ 'ဆရာချစ်'??
ယာဉ်စစ်ဆေးရန် ရပ်တန့်ခိုင်းစဉ် ထွက်ပြေးသည့်ယာဉ်အား သေနတ်ဖြင့် သတိပေးခြောက်လှန့် ပစ်ခတ်ခဲ?
ရွှေပေါက်ကံမြို့၏ ဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည့် ဇေကမ္ဘာဝင်း၊ မင်္ဂလာဒုံဥယျာဉ်အိမ်ရာ ဂိတ်တွင် ယာဉ်ဖြတ?
‘ခွဲထွက်ခွင့်နှင့် နိုင်ငံရေးသံဝေဂ’ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ များစွာနားလည် တရားရကြဖို့